Global Voices teny Malagasy » Tetikasa Mapping for Niger : Ny Tantarany sy ny Vinavinany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2015 18:45 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Mainty, Nizera, Fampandrosoana, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tanora, Teknolojia, Tontolo_iainana, Tsidika, Vaovao Tsara, Vonjy Voina
Ekipan'ny Open Street Map Niger
Tahaka ireo firenena manodidina azy, miady amin'ny fiantraika ratsin'ny Boko Haram ao amin'ny faritra koa i Nizera. Na izany aza, te hampiseho ny tanora ao aminy fa mitombo hery izy na dia eo aza ny toe-draharaha. Tahaka izany ohatra ny fikambanana Open Street Map ao Nizera. Ity ny fanadihadiana niarahana tamin'ny iray tamin'ireo mpikambana, Fatiman Alher, mpianatra jeografia ary nizara vao haingana ny traikefany tamin'ny fandraketana an-tsarintany an'i Nizera:
Ny Fikambanana OpenStreetMap Niger (OSM_NE)
Hatramin'ny nipoirany, manatontosa asa an-tsitrapo fampiroboroboana ny tetikasa OpenStreetMap eny anivon'ny fikambanana tsy miankina, fikambanana iraisampirenena, manampahefana eo an-toerana, toeram-pampianarana ambony sy mandrittra ny valandresaka ny fikambanana OpenStreetMap.
Karakarain'ny fikambanana ny hetsika (fifarimbonana) fandraketana an-tsarintany ( cartoparties), ny fiofanana misokatra (hoan'ny daholobe) sy ny mameno ny antontan-kevitra OpenStreetMap amin'ny alalan'ny tetikasa an-tsitrapo (sarintanin'i Niamey sy ny oniversiteny, ny tanànan'i Dosso, Zinder, Agadez sns) miaraka amin'ny famokarana rakitra an-davitra amin'ny alalan'ny sary avy amin'ny zanabolana sy fanangonana rakitahiry eny ifotony. Misy ihany koa ny mapathons (atrikasa fananganana antontan-kevitra faobe ao amin’ ireo faritra mahaliana) miaraka amin'ireo fikambanan'ny OSM ( OpenStreetMap) ao Afrika Andrefana sy ny fikambanana OSM manerantany.
Ny fetran'ny fampitaovana, ny vola ary ny olona, ny toe-draharaha politika matetika mihenjakenjana indrindra ao amin'ny sisintanin'i Mali, ary ny karazana tsy fahafantarana ankapobeny ny Open Data, no mahatonga ny hetsika tsirairay midika ho firosoana amin-kitsimpo sy fitiavana!
Hatramin'ny tapaky ny taona 2014 ny Tetikasa Tahala OSM mpiteny frantsay no nanohana ny fampandrosoana ny tetikasa OpenStreetMap ao Nizera. Miseho amin'ny fandraisana anjara ny mpikambana ao amin'ny fikambanana OSM_NE amin'ireo iraka fanatevenam-pahaizana ao amin'ny vakim-paritra karakarain'ny fikambanana Tetikasa Tahala OSM miteny frantsay izany. Nisy, noho izany, mpikambana ao amin'ny fiarahamonina OSM_NE nandray anjara misiona fanatevenam-pahaizana 5 : tao Burkina Faso sy Togo tamin'ny taona 2014 sy tao Burkina Faso, Côte d'Ivoire ary Togo tamin'ny 2015. Namondrona mpikambana avy amin'ny firenena mpiteny frantsay (Bénin, Burkina Faso, Mali, Nizerar, Senegaly sy Côte d'Ivoire) ary Frantsa nandritra ny herinandro telo ny hetsika nataon'ny OSM.
Atrikasam-piofanana momba ny fandraketana an-tsarintany
Mikasika indrindra ireo fotoana famerenana ara-teknika sy ara-pandaminana ireo iraka fanatevenam-pahaizana ataon'ny tetikasa EOF amin'ireo mpikamban'ny OSM NE izany. Dia notontosaina tao amin'ny Toeram-pampianarana Nomerikan'ny Oniversiten'i Niamey (UAM) sy tao amin'ny Search For Commound Ground (CFCG) ny fiofanana.
Open Street Map Niger – Fihaonambem-pirenen'ny Tanora momba ny Fiovaovan'ny Toetr'andro tamin'ny 19 Novambra 2015
Misy ireo fotoana ihaonana handraketana an-tsarintany karakarain'ny fikambanana OSM-NE isa-potoana. Amin'ny ankapobeny, mandrakitra an-tsarintany manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro avy lavitra ireo mpandray anjara ary manatontosa fanadihadiana eny ifotony sy manitsy ireo antonta-kevitra voangona amin'ny hariva.
Misy ihany koa ny mapathons ( (atrikasam-pananganana antontan-kevitra iarahan'ny daholobe any amin'ireo faritra mahaliana) karakaraina miaraka amin'ireo fikambanana OSM Afrika Andrefana sy ny fikambanana OSM manerantany, indrindra ho setrin'ny krizy maha-olona: Ebola, Boko Haram na koa ny horohorontany tao Nepal.
Noho ny mahafoibe itoeran'ny fikambanana OSM_NE ao Niamey, dia misy hetsika mitohy hatrany amin'ny fandraketana an-tsarintany hatramin'ny fiandohan'ny tetikasa OpenStreetMap ao Nizera, manararaotra ny fifindra-toerana sy ny fotoana malalaka ireo mpikambana handraketana an-tsarintany an-davitra na eny ifotony ny ao an-drenivohitra. Mifantoka amin'ny zotran'arabe, toerana misy fanorenana sy ny sehatra ilaina (fahasalamana, fanabeazana, tranom-panjakana, toeram-pivarotana, toeram-pahasalamana sns) ireo mpandrakitra an-tsarintany. Misy ihany koa anefa ireo faritra hafa kendrena.
Nandritra ny fialan-tsasatry ny sekoly hatramin'ny volana Jona ka hatramin'ny Septambra 2013, nifantoka tao amin'ny departemantan'i Madaoua, ny faritra Tahoua sy Zinder ny fikambanana OSM_NE . Isaky ny faran'ny herinandro mandritra ny iray volana, nivory mba handrakitra ireo faritra an-tsarintany an-davitra ny mpikambana.
Mila herinandro ny fandraketana an-tsarintany hampidirana ny fampahafantarana rehetra ao amin'ny tahiry. Afaka mijery ny asa voatontosan'ireo tanora telo tamin'ny alalan'ny fitaovana voafetra ianao ankehitriny amin'ny fijerena  ny sarintany OpenStreetMap ny tanànan'i Dosso.
Fisokafana amin'ireo fikambanana OSM hafa ao Afrika Andrefana
Fiarahamonina OSM Afrika Andrefana
Amin'ny fifandraisana amin'ny fikambanana OSM ao Afrika Andrefana, amin'ny alalan'ny iraka ataon'ny Tetikasan'ny Mpiteny Frantsay sy ireo hetsika isan-karazany ao amin'ny vakim-paritra tahaka ny forum fanaon'ny Innov’Africe isan-taona, dia miara-miasa akaiky amin'ny fikambanana any Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nizera, Mali, Senegaly ary Togo ny fikambanana OSM_NE.
Hita ao amin'ny fifandraisana ny ezaka iombonana amin'ny fandraketana an-tsarintany sy ny fifampizarana sy fifanakalozana mavitrika eo amin'ny lafin'ny fifandraisana, teknika ary fandaminana. Matanjaka indrindra izany fiarahamiasa izany nandritra ny fanatontosana ny fihaonamben'ny State Of The Map (na Toetry ny Sarintany) tahaka ny nitranga tamin'ny 2015 tao Burkina Faso na ny amin'izao fotoana izao ao Togo. Nokarakaraina nandritra ny hetsika nataon'ny Tetikasa Tahala OpenStreetMap mpiteny frantsay ireo SOTM roa ireo. Ny ezaka fandraisana anjaran'ny fikambanana amin'ny fandraketana an-tsarintany nandray anjara tamin'ny hetsika Map4Ebola no nahafahana niady tsara kokoa tamin'ny valan'aretina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/30/77219/